Nyaya nyowani umo iyo Apple Watch ingadai yakachengetedza hupenyu | Ndinobva mac
Tiri zvakare kutarisana nenyaya nyowani umo iyo Apple Watch haisisiri yakapusa smart wachi inogamuchira zviziviso, inokuzivisa iwe nezvako nguva, nezvimwe. kuve muponesi wehupenyu kumutengi ane matambudziko emoyo. Mune ino kesi isu tinotamira kuEngland, kunyanya kuCockermouth, uko Kevin Pearson ndiye protagonist wenyaya yedu.
Pearson, 52, iye aive akagara achiverenga chinyararire, pamwe ne "kufunga nezve rake bhizinesi.". Panguva iyoyo chaiyo, yake Apple Watch yakamuudza kuti kurova kwemoyo wake kuri kuwedzera. Pakutanga akafunga kuti yaive mhosho muApple smart wachi kubva zvaaive akagara, akadzikama, pasina kuita chero kuyedza uye haana kuona chero chinhu pane zvakajairwa.
Iwe wakatevera Apple Watch kukurudzira uye wanga uchitarisa kurova kwemoyo wako kwemaminetsi mashoma anotevera. Mune ino nguva yenguva kukwira nekudzika zvaive pachena: ivo vakakwira kusvika 135 kurova paminiti uye vakangoerekana vadonha kusvika makumi manomwe neshanu paminiti. Chimwe chinhu chakanga chisina kumira zvakanaka.
Neraki uye zvakangoitikawo, Kevin Pearson anga atove muchipatara; aipota achienda nababa vake kunoongororwa bvunzo. Saka akaudza vanachiremba uye chokwadi zvakakwana: chimwe chinhu chakange chisina kumira zvakanaka. Vakamutumira kuchipatara chakakura uye ikoko vakamuudza kuti, mushure mekuverengeka kwemoyo kuverenga kuverenga uye kuongororwa kweropa, aive pakati peinonzi nachiremba "Chiitiko."
Hapanazve rumwe ruzivo rwakapihwa kune iyo svikiro. The Independent uyo akadzokorora nhoroondo. Chave kuzivikanwa ndechekuti Kevin Pearson ane Apple Watch yake yakagadzirirwa kuitira kuti izivise mushandisi wayo apo kurova kwemoyo kunodarika makumi matanhatu kurova paminiti.. Saizvozvowo, protagonist yedu anga asina kufunga nezveichi chakakosha chikamu cheporpular kupfeka Apple uye zvese zvinyorwa zvinochengetwa mukati kuti ugovana nachiremba wako. Sezviri pachena, akanyorawo tsamba yekutenda kuna Tim Cook, CEO wekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyaya nyowani umo iyo Apple Watch ingadai yakaponesa hupenyu
Zvinoenderana neDigitimes, Pegatron akamirira odha yekutanga kugadzira MacBook yekutanga ine processor yeARM.
Razer inogadzira ayo ekunze emifananidzo makadhi anoenderana neMacOS